I-Horoscope ka-2015 ye-Gemini: ukubikezela okunembile kakhulu kwezinkanyezi zamadoda nabesifazane
I-Horoscope ye-2015 ye-Gemini
i-horoscope yamawele ngama-2015
Uhlamvu olunembile lwesibonakaliso luzovumela abameli balo ngo-2015 ukuba basebenzise wonke amakhono ozwela futhi baze bajwayele abantu. Lokhu kuzwela ngeke kube lula ngaso sonke isikhathi, ngoba abantu abajabuli nje kuphela, kodwa unganaki ukukhulumisana noma izinyathelo zokuqala zokuxhumana. Zama ukulawula isimo sengqondo esishintshayo futhi ungenzi iziphetho zesigaba ezinyangeni zokuqala ngemuva kokufunda okuthile.
I-Horoscope yowesifazane we-Gemini we-2015
Kwabesifazane beGemini, ukuthuthukiswa komsebenzi kulo nyaka kuzoba yimpumelelo ikakhulukazi uma kuhlobene nomsebenzi wokudala, futhi akukhathaleki ngendlela - ngisho nomsebenzi wesikhashana ekuboneni kuqala, isibonelo, amaphepha ayingxenye yento engaphezulu. Futhi kuwo, njenganoma yimuphi umsebenzi, kunenhlansi evuthayo enkosini enekhono. Ungakwenza lokhu, noma ngabe ngaphambili kwakubonakala kuwe ukuthi akunakwenzeka, futhi uzitholele emoyeni wesibili. Futhi abamele imisebenzi yokudala nezenzo zokuzilibazisa zenkanyezi bahlonishwa ngokuphelele phakathi nengxenye yokuqala yonyaka: uzothola ukuqashelwa nokudumisa hhayi kuphela phakathi kwabangani bakho. Futhi uzothola eziningi ezintsha.
Ubungane buyoba yingxenye ebalulekile empilweni yakho kulo nyaka. Ungalahli ithuba lokufunda abantu abasha, ikakhulukazi ehlobo - i-kaleidoscope yobuntu, imizwa, imizwelo iyokwenza okuhle ngisho nanjengomqapheli, kanti abanye kulabo ohlangana nabo bazoba yingxenye ebalulekile empilweni yonke yesikhathi esizayo.
Ungangqubuzani ubungane nothando - izinkanyezi zinikeza indawo ngo-2015, futhi uma umndeni womama-amawele angakwazi ukuguqulwa ngokuphawulekayo ebuhlotsheni obusungulwe, labo abaseshayo bazohlatshwa umxhwele ngobubanzi bemibono evulayo. Ungesabi ukuhamba, uma uqonda ukuthi lokhu ufuna ngempela, ikakhulukazi uma kwenzeka uthando luhambisana nenhlonipho noma ubungane. Izintshisekelo ngaphandle kwesisekelo esinjalo, njengomthetho, zihlala isikhathi esifushane.
I-Horoscope yeGemini yesilisa ka-2015
Amadoda Gemini ngaphansi komthelela ohlangene we-Mars ne-Mercury angazithola enhlobonhlobo ethile, ikakhulukazi kwikota yesibili yonyaka, kodwa ukuphonsa amapulani namaphrojekthi amadala akufanelekile. Mhlawumbe wawuswele kuphela i-push of destate ukuze uqedele konke - uma ufuna isibonakaliso, izinkanyezi uzonikezwa zona. Ekupheleni kwebusika, kuyoba nesilingo sokubaxosha noma ukuwenqaba ngokuphelele imibono emisha. Cabanga ngakho konke kahle ngaphambi kwalesi sinyathelo. Bala ngokusekelwa kwabangani - ngeke bakushiye.
Impilo, naphezu kwezinkinga emhlabeni kulokhu, kuzokujabulisa wena kuphela, kodwa uhlangothi lwezezimali empilweni lungadumala uma ungaqedi izindleko ezincane. Imali inomkhuba wokugeleza endaweni engaziwa, ikakhulukazi eGemini yokudala. Ungangeni esilingweni sokungena esikhwameni, futhi akunandaba ukuthi unomuntu noma ibhange: kuleso simo sokuqala, izimo zingathuthukisa ukuze uxabane nalo muntu kuze kube phakade, nakuba uzobuyisela isikweletu, futhi okwesibili konke kuyoba nzima nakakhulu. Izinkanyezi kuleli cala zibikezela izinkinga ezingaxhomeki kuwe, kodwa lowo obolekisayo uyobe engakhululekile ukuchaza imbangela yabo.
Ekuphileni komndeni, amadoda aseGemini kulindeleke ukuba abe nokuzinza okufanayo njengabesifazane abanesibonakaliso esifanayo. Ukuthula kwengqondo nokusekelwa kwabathandekayo kuzosiza ukuqondisa amabutho ekuthuthukiseni, kodwa ungakhohlwa ngalabo abakunikeza lokhu. Ukusesha i-Gemini yedwa ngokucabangela okufanele kungabuyiselwa ekuqaleni kwehlobo. Khumbula kuphela lokho ukucinga kangcono phakathi kwabantu abanomqondo onjengezinhloso zokuphila - njengokungathi ukuphikisana akuthandi, kuzo zonke izinto eziyisisekelo kungcono ukuba nento efanayo.
I-Horoscope yama-Aries-abesifazane ngo-Ephreli 2017
Kuzoba yini ngonyaka ka-2018 wezinja ze-Aquarius
I-Horoscope ngo-December 2017 - owesifazane-i-Libra - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
I-Horoscope ngo-February 2018 - Owesifazane we-Sagittarius - kusukela kuTamara Globa no-Angela Pearl
I-Horoscope ye-Lion Woman ngo-July 2017
Indlela yokwenza massage ebusweni nasentanyeni ekhaya?
Ingane yami ayiyona abangane nezinye izingane
Izimbangela zomdlavuza wesibeletho
Ukuthuthukiswa kwenkulumo enganeni encane
Inkontileka yomshado uma kunesahlukaniso
Izitshalo zangaphakathi: inothi lokungena ngemvume
Ikhekhe le-chocolate nge espresso
Isinkwa "Flower Ebomvu" kusuka kwesithombo
Amanga mayelana namakati nezinja
Ama-Masks kanye nama-infusions asekelwe itiye lezinwele
Amafutha e-rapeseed ekudleni kwezingane